I-Grampians Hillside Retreat i-Relaxing Getaway - I-Airbnb
I-Grampians Hillside Retreat i-Relaxing Getaway
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguFiona
I-Grampians Hillside Retreat ikufutshane nendlwana entsha ehonjiswe ngobumnandi ehlala abantu abane. Kwesi silungiselelo simnandi ungaphumla okanye uphume kwaye ujonge indawo yakho entle. Ukuhamba kwentaba, ukuloba, ukutyelelwa kwewayini, ukutya okumnandi, iivenkile ezizodwa, amachibi kunye nemisebenzi ezaliswe yi-adrenaline.
I-cottage ivulekile yokuhlala ecwangcisiweyo, kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Igumbi lokulala eliphambili linebhedi yokumkanikazi kwaye igumbi lesibini linee-singles ezimbini ezinokudityaniswa kunye kwizibini xa ziceliwe.
Eli khaya limangalisayo likufutshane nekhaya elitsha liqhayisa ngamagumbi amabini okulala, igumbi langasese elahlukileyo, igumbi lokuhlambela elinye elinokufikelela kabini njenge-ensuite, ikhitshi elilungiselelwe ngokupheleleyo, indawo yokutyela kunye negumbi lokuphumla. Ikhaya lifakwe ngokuhonjisiweyo ngeempahla zodidi kunye nelinen. Ekufikeni kweendwendwe ziya kunikwa iwayini kunye neetshokholethi ukuze zonwabele kuxolo lwedesika ephangaleleyo yangaphantsi okanye nizithobe ngaphakathi kwiibhedi ezipholileyo. Iindwendwe ziphathwa ngembonakalo yentaba ekumgangatho ophezulu ngelixa zonwabele izilwanyana zasendle ezihlala zindwendwela.
4.97 · Izimvo eziyi-282
Sime kwimizuzu nje ukusuka entliziyweni yeeHolo zeGap, apho unokuphonononga imisebenzi eyahlukeneyo ukusuka ukukhwela intaba, imidlalo yasemanzini, ukuloba, iiwineries, iigalari zobugcisa, igalufa encinci, i-zoo kunye nokunye okuninzi ... okanye ungaphumla ekhaya. kwaye ujabulele uxolo kunye nokuzola kunye neembono ezintle zeentaba kunye nezilwanyana zasendle.
Nangona indlu isehlathini ayikho kwindawo efihlakeleyo, kodwa isitalato selizwe elizolileyo.
IGrampians Hillside Retreat yindlu ezizimeleyo. Akukho nxibelelwano neendwendwe nangona kunjalo ukuba iindwendwe zifuna nantoni na zamkelekile ukuba ziqhagamshelane nabanini nanini na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Halls Gap